သတင်း - Parfit အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာ (Jiangsu) Co. , Ltd မှ
စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု methodThe slider ကိုကွေးဟိုက်ဒရောလစ်ဆင်းလှည့်မရနိုငျနှင့်အဆို့ရှင်နောက်ပြန်ဆုတ်လျှပ်စစ်သံလိုက်ပြောင်းပြန်မရနိုင်ပါ။ လျော့ရဲရဲနဲ့အိမ်ရာကိုပြုပြင်တာတွေဝက်အူပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်အစားထိုးလိုက်ပါ။ တိုက်နယ်စစ်ဆေးမှုများ Check နှင့်တင်းကျပ်; ယင်းနောက်ပြန်ဆုတ်အဆို့ရှင်၏အဆို့ရှင်ဖမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကြယ်သော, ထိုဆလိုက်ဆို့ရှင်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်သို့မဟုတ်အစားထိုးလိုက်ပါ။
ဟိုက်ဒရောလစ် Bende စက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုသုံးပါ
ကျွန်မဟိုက်ဒရောလစ် Bende စက်သုံးတဲ့အခါမှအာရုံစူးစိုက်မှုအဘယျသို့ပေးဆောင်ရမလဲ? အဆိုပါဟိုက်ဒရောလစ် Bende စက်လည်ပတ်မှုလုပျထုံးလုပျနညျးနဲ့အညီတင်းကြပ်စွာဖြစ်ရမည်။ ယင်းဟိုက်ဒရောလစ် Bende စက်နှင့်အတူစက်များအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
အဆိုပါ CNC ဟိုက်ဒရောလစ် Bende စက်ကဘာလဲ?
အဆိုပါ CNC ဟိုက်ဒရောလစ် Bende စက်အားဖြင့်ထကျကြရန် slider ကိုမောင်းနှင်ခြင်း, servo အချိုးကျအဆို့ရှင်အပေါ်အမျိုးမျိုးသောအဆို့ရှင်လုပ်ရပ်များမှတဆင့်လက်ဝဲနှင့်လက်ယာဆလင်ဒါ၏ extension ကိုများနှင့်ပြန်လာမောင်းသောကို double-ဆလင်ဒါကို up-type ကို CNC ဟိုက်ဒရောလစ် Bende စက်, ကိုရည်ညွှန်းသည်။
နေမှုကိုချေဖျက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် Cast အကြားခြားနားချက်များဘာတွေလဲ?